Final Cut Pro X kinova 10.4 dia misy amin'ny fanovana Virtual Reality sy 8k | Avy amin'ny mac aho
Manomboka anio dia azontsika atao ny misintona ny kinova nandrasana nandrasana efa nandrasana hatry ny 10.4 an'ny Final Cut Pro X miaraka amin'ireo vaovao rehetra nambara taminay. Voalohany indrindra, manohana rakitra ao anaty izy HEVC endrika, ny endrika video vaovao ampiasain'ny Apple ao amin'ny iOS 11 sy High Sierra. Etsy andaniny, ny kinova farany an'ny rafitra fikirakiran'ny Mac anay dia manohana ity fenitra horonantsary vaovao ity, saingy niandry toy ny mahazatra ny Apple ny famoahana ny Mac vaovao sy matanjaka azy, ny iMac Pro. Tadidio fa ny kinova 10.3 dia nivoaka niaraka tamin'ny fampisehoana ny MacBook Pro 2016.
Saingy mitondra zavatra betsaka kokoa noho ny endrika vaovao. Efa afaka manova horonan-tsary amin'ny fampiasana fitaovana virtoaly virtoaly izahay. Miresaka momba ilay malaza isika Horonantsary 360 degre. Etsy ankilany,
Azo atao izany, saingy miankina amin'ny toetra mampiavaka ny Mac tsirairay avy izany. Raha mandeha amin'ny antsipiriany bebe kokoa isika, maro amintsika izay te-hanitsy horonantsary an-trano no gaga amin'ny fikajiana amin'ny antsipiriany ny fari-piainana, ny saturation ary ny loko fetrany. Ankehitriny ny faribolana sasany dia mamela antsika hibaiko sy hitantana bebe kokoa amin'ny fanitsiana ny mazava sy ny loko.
Ny zava-baovao iray hafa dia ireo fitaovan'ny dropper. Toy ny rindranasa fanovana sary, ireo eyedroppers ireo dia mamela ny mpampiasa hanisy loko manokana sy mampihatra ny fanjana fotsy amin'ny tanana.
Mora kokoa ihany koa amin'ity kinova vaovao ity, mampihatra LUT manokana ny fakantsarintsika, ka ny fanafarana atiny, indrindra raha manao rakitsary amin'ny fakantsary maro isika, dia tsy mampiseho fampitahana mazava be, loko sy loko ary loko.
Ary farany, raha mamoaka atiny amin'ny HDR ny Apple TV 4k antsika, FCP X dia afaka mandrindra miaraka amin'ny elanelam-potoana avo lenta, na amin'ny fanontana, ary rehefa miasa miaraka amina monitor ivelany izay miasa amin'ny HDR.
Raha efa manana FCP X ianao dia afaka miditra amin'ny kinova farany manomboka izao. Fa mety ho tonga ny fotoana hanovana toa ny pro ary te hahazo ilay kinova ankehitriny ianao. Amin'izany dia azonao atao ny manaingo azy ao amin'ny Mac Apple Store amin'ny vidiny € 329,99
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Mac App Store » Final Cut Pro X kinova 10.4 dia misy amin'ny Virtual Reality sy fanovana 8k
Navoaka ny mikirao praogramanao HomePod vaovao eo am-piandrasana ny fahatongavany